Aidfile Recovery Software 3.5.3.0 Portable...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Aidfile Recovery Software 3.5.3.0 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Software ကောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါ...!Portable လေးဖြစ်တာကြောင့် Install လုပ်ပေးစရာ မလိုပါဘူး...!သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေပြီး လွယ်ကူပါတယ်...! Format ,Deleted ,Partition and RAW စတဲ့ဖိုင်တွေကို Recovery လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...!ကျွန်တော် အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 4.96 MB )
No Response to "Aidfile Recovery Software 3.5.3.0 Portable...!"